Nri ala obere carb nwere ike ibute AFib? - Ihe Oriri
Isi > Ihe Oriri > Obere nri carb na afib - nzaghachi nye nsogbu a
Obere nri carb na afib - nzaghachi nye nsogbu a
Nri ala obere carb nwere ike ibute AFib?
Ala-nri carbohydratejikọtara ya na ihe ize ndụ dị ukwuu nke nsogbuatrial fibrillation, na-egosi na usoro njikwa njikwa a na-ewu ewu, site na igbochicarbohydrateoriri, a ga-eji nlezianya na-atụ aro ya ma a ga-eduzi ọmụmụ ihe ọzọ iji nyochaa mmetụta ahụ.04.25.2019
Daalụ maka iji edemede edemede a maka Dr. Agaala AFib. Abụ m dr Morales, na akụkụ nke isiokwu taa, anyị ga-ekwu maka nri keto na otu onye ọ bụla nwere fibrillation dị na nri si esi nri.
Nri keto bụ nri a ma ama na arụmụka ugbu a, ọ bụkwa n'ezie otu okwu ọchụchọ kachasị elu na Google na 2018, yabụ enwere ọtụtụ, ọtụtụ ndị nwere mmasị na nri keto. Enweela m ọtụtụ ndị ọrịa na-ajụ maka nri nri na ma ha chere na ọ dị mma ma ọ bụ dị mma ka ha jiri ya na fibrillation ha. Ekwuru m na n'oge gara aga na ụkọ ọnwụ nwere ike ịdị irè iji melite mgbaàmà nke atri fibrillation.
Enweela ọtụtụ ọmụmụ n'oge gara aga nke na-egosi nha ọnwụ nke 10% nke ibu ibu onye ọrịa nwere ike ime ka ihe karịrị 40% nwee ọganihu na mgbaàmà A-fib. Ma gịnị banyere nri, ị maara? Ndị mmadụ chọrọ ịma ụdị nri dị mma maka ha yana ma nri nri ha ọ bụ ezigbo nri ha kwesịrị iji. Ya mere maka ndị gị nke na-amaghị ihe nri nri keto bụ, gịnị ka ọ na-eme? Yabụ nri keto bụ nri ama ama ugbu a.
Kedu ihe bụ nri dị obere obere carb? Ọ bụ obere nri carb nke na-ebute ọnọdụ nke ketosis. Nke a pụtara na ọ na - eme ka ahụ gị jiri mmanụ ọzọ ọzọ karịa shuga, nke bụ ketones na - emebi mkpụrụ ndụ abụba. Ọ bụ ihe ewu ewu nke ukwuu ọnwụ ọnwụ ma eleghị anya ị hụwo ndị siri ike na ndị ọzọ nọ na ntanetị bụ ndị jiri nri keto na-efunahụ ngwa ngwa.
O yiri ka ọ dị ezigbo irè dị ka ọnwụ. Mana ọ dị mma maka ahụike maka ndị nwere obi? Ọrịa ma ọ bụ karịsịa fibrillation nke atrial? N'ụzọ dị mwute, enwere akụkọ ụfọdụ gosipụtara na ketosis, ọnọdụ nri nke ị nwere ketones karị n'ọbara gị, nwere ike ịkpalite ngosipụta ma ọ bụ duga n'ọtụtụ oge nke atr fibrillation - obere akụkọ ole na ole. Enweghi otutu akwukwo ebe obula, odi nkpa na nri nri nwere ike inyere gi aka inweta otutu ihe nke atr fibrillation.
kedu ihe egbe egbe na agba
Ma olee otu ọ ga - esi mee nke ahụ? Ọnọdụ ketosis ma ọ bụ ketones n'ime ahụ gị na-emetụta pH gị n'ezie, ụdị ụdị nke acid-base anyị nwere n'ime ọbara na ahụ anyị, na enwere ọtụtụ akwụkwọ, ọtụtụ akwụkwọ akụkọ banyere acidic keto diet and alkaline keto diet . Ndị a bụ ihe niile metụtara pH na ahụ mmadụ, na ịmegharị pH gị n'ahụ gị nwere ike imetụta ihe na-akpata atr fibrillation. Obi dị nro nke ukwuu na mgbanwe pH sekit na ụma ndị ọzọ nwere ike ịkwụsị njedebe nke fibrillation nke atrial.
Ọnọdụ ketosis nwekwara ike imetụta nrụrụ elektrọnị gị. Ọtụtụ n’ime unu maara nsogbu ụkọ potassium na magnesium, nke m nwekwara ike itinye aka na ngosipụta nke atr fibrillation. Ya mere, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya, na otu ụzọ, na nri nri keto nwere ike imetụta ma ọ bụ nwee ike ịkpalite ngosipụta nke atr fibrillation.
Ọ na-eme ka ahụike. Ma nke ahụ bụ isi ihe kpatara na anaghị m akwado ndị nri m nri keto. Ahụrụ m akụkọ ole na ole na-egosi na ọ nwere ike ọ gaghị aba uru maka ndị ọrịa nwere fibrillation.
Ọfọn akwụkwọ, weebụsaịtị, akwụkwọ ndị ahụ na-ele anya na ọ dị oke mma dịka atụmatụ nhalata ibu, mana maka ndị ọrịa nwere fibrillation nke atrial, nke a nwere ike ọ gaghị abụ atụmatụ ziri ezi. Ọ nwere ike ịbụ atụmatụ dị mkpirikpi dị mma maka ụfọdụ ndị ọrịa, mana dị ka mbibi dị ogologo oge na usoro njikwa ibu, ọ nwere ike ọ gaghị abụ atụmatụ ziri ezi maka ndị ọrịa nwere atr fibrillation. N'ihe banyere fibrillation nke atrial yana ndị ọrịa nwere ọrịa obi, enweela ọtụtụ data dị mma ma ọ bụrụla ọtụtụ afọ Isiokwu na-akwado iji nri Mediterenian maka fibrillation atrial yana ọtụtụ ihe nchekwa dị mma maka ndị ọrịa nwere ọrịa obi, nke m ga-atụle ọzọ na ngalaba isiokwu ọzọ.
Mana n'oge a, ọ ga-amasị m ịbanye na nri ketone yana ihe kpatara na anaghị m agwa ndị ọrịa m ka ha nwee ike ịmalite ime ihe ọ bụla, kama na-agwa dọkịta gị mgbe niile gbasara nri. Daalụ maka ịkekọrịta akụkụ edemede a maka Dr. Gara leta AFib.
Nri obere obere carb nwere ike ibute obi?
Ketosis na - eme ka ahụ gị rie ọtụtụ abụba karịacarbs, nke na-eduga n’ọkụ ndị ọzọ kilo. Ka o sina dị, ọ bụrụ na ndị mmadụ abanye na ketosis maka oge mbụ, ha na-ahụ ụfọdụ mgbaàmà ma na-amalite ichegbu onwe ha. Ihe mgbaàmà ụfọdụ bụ isi ọwụwa, ike ọgwụgwụ anụ ahụ, na ịrị eluobiọnụego ma ọ bụobi obi.03.11.2020
Ugbu a, ka anyị kwuo maka ihe zoro ezo nke palpitations, gịnị bụ a palpitations mgbe gị obi otiti na-agba ọsọ nwa oge, awụgharị ma ọ bụ flapping tụgharịa-flops gburugburu obodo, na ọtụtụ ndị na-freaked si na-atụ egwu na ọtụtụ oge ọ gaghị abụ nsogbu ma nke a na-abụkarị mmamịrị na ọbara shuga gị, ma ọ dị elu ma ọ bụ dị ala shuga.M nwere ike ị ga-eri chocolate na ihe abụọ na-akpali akpali theobromine na caffeine, nke nwere ike ime ka obi gị mee ihe ụfọdụ, caffeine kachasị mmanya na-aba n'anya ga-enwe ahụ ọkụ ma ọ bụ enweghị potassium ma ọ bụ magnesium nwere ike ịgbanwe ụda obi, mana enwere ihe ọzọ na-akpata palpitations m chọrọ ịkọ nke metụtara okwu gallbladder gị mgbe ị nwere gallstones ma ọ bụ gallbladder gị nwere nsogbu njikọ dị n'etiti ha abụọ Ọ bụrụ na imeju na obere eriri afọ na-ebuwanye ibu, ma ọ bụ ọ bụrụ na i nwere apịtị n'ime eriri afọ gị Ihe ndị a niile nwere ike ịgbanwe physiology nke obi gị, nke enwere ike ịlele na EKG. Ugbu a achọghị m ịga oke n'ọhịa nke otu ụkpụrụ ga-egosi na EKG ị nwere ike ile anya nke a ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị, mana enwere mgbanwe n'ime obi nke na-apụta mgbe nsogbu gallbladder pụtara. , ọ bụrụ na mmadụ nwere ịgụ EKG na-adịghị mma ọ nwere ike bụrụ nsogbu na obi, mana ọ nwekwara ike ịbụ nsogbu na gallbladder ma ọ bụghị obi m na-eweta ihe a ugbu a n'ihi na ihe ikpeazụ ịchọrọ ime bụ nke na-emerụ ahụ bụ ịwa ahụ na nsogbu ahụ bụ ihe ọzọ, yabụ ana m ajụ ndị mmadụ ihe ị riri tupu ị nwee obi ụfụ a na-enweghị isi na ị riri ihe ha anaghị eri, ma ọ bụ na ha nwere ọtụtụ ude mmiri ma ọ bụ ihe ọhụrụ ma ọ bụ dịka Chocolate ma ọ bụ ọtụtụ caffeine ma ọ bụ mmanya na-eri ma ụfọdụ nri ọhụrụ agbakwunyere na nri na ọ bụrụ na ị hụbeghị isiokwu m ndị ọzọ na gallbladder, lee ind ebe a ụfọdụ mgbaàmà ndị ọzọ a na-ahụkarị nri mgbu dị n'okpuru aka nri gị ngụgụgụ ngịga ị nwere ozuzu ma ọ bụ ihe mgbu ma ọ bụ nwee ike ịmetụta n'akụkụ aka nri nke isi gị ma ọ bụ anya aka nri ma ọ bụ ọnyà ziri ezi ma ọ bụ ubu aka nri ma ọ bụ diamond kwesịrị ekwesị na akwara dị n'akụkụ aka nri n'etiti ọkpụkpụ azụ na ubu ubu gị bụzi ihe mgbaàmà ọzọ Ma ọ bụ oche gị na-ese n'elu mmiri ma ọ bụ na ị na-enwe mmetụta ọgbụgbọ ị na-enweta gas, belching ma ọ bụ ọbụna afọ ntachi Ihe eji eme ihe n'ime imeju gị ma chekwaa ya na gallbladder, bụ mmanụ a na-egbu egbu nke na-egbochi afọ ntachi. nwere obere bile i nwere ike na-afọ ntachi, ya mere ọtụtụ ihe nwere ike ịgbanwe bile mmepụta na nchekwa. Onye ọ bụla kwesịrị nnọọ ịkọwa ihe Kasị hideous bile bụ a nchacha nke na-eme ma na-eji ahụ gị mgbe nn ị na-agbaze abụba ọ na-enweta ihe si abụba abụba ndị nwere ike ịgbakwunye vitamin AED na K Ọ na-ewepụtakwa omega-3 fatty acids na abụba ndị ọzọ dị mkpa maka ahụike gị, ọ bụ enweghị ụkọ bile nke nwere ike ibute gallstones. ther enwere ike ime ka obi gallbladder palpitations Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere gallbladder enwere m ọtụtụ isiokwu m ga - akwado ịmalite site na nke a
Kedu nri ndị na-ebute fibrillation nke atrial?
Nnyocha ụfọdụ egosiwo nke ahụnrinnukwu abụba na abụba zuru oke nwere ike jikọta ya na ihe ize ndụ dị ukwuuAFibna ọnọdụ obi obi ndị ọzọ (20, 21).Ihe oriridị ka bọta, cheese, na anụ uhie nwere oke abụba jupụtara.
Kedu nri kachasị mma maka onye nwere AFib?
Ọ bụ otu n'imekacha mmaụzọ ịkwụsị iji gbochieAFib. Gbado anya na mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, ọka niile na mkpụrụ osisi sitere na protein dịka agwa, mkpụrụ, na mkpụrụ. Zerenrindị ahụ nnu ma ọ bụ nnukwu shuga ma ọ bụ abụba jupụtara. Ngwaahịa mmiri ara ehi dị ala ma ọ bụ nke nwere abụba na anụ ndị na-esi ike karị dị ka azụ na anụ ọkụkọ bụ nhọrọ ka mma.30.10.2019
Kedu ka ị ga - esi gbanwee fibrillation nke atrial?
na-eri nri siri ike nke juputara na nkpuru osisi, akwukwo nri, na oka. na-emega ahụ. ijikwa ọbara mgbali elu site na ọgwụ naekeọgwụgwọ, ma ọ bụrụ na achọrọ. izere ị excessụbiga mmanya ókè na ịfeụ caffeine.Mar 24 2017
Ọ dị mma maka AFib?
Obere CarbUsoro nrindiaNwere ike Dịkwuo Egwu nkeAFib. Nnyocha buru ibu banyere ihe oriri na nsogbu obi nwere ike ime ka ndị na-ele n'úkwù ha chee echiche ugboro abụọ banyere ịfefe pasta ahụ.Mar 13 2019
Kedu ihe ndị na-adịghị mma nke nri obere carb?
Nsogbu ndị dị ka arrhythmias obi, mmetụ ọrụ obi na-arụ ọrụ, ọnwụ mberede, osteoporosis, mmebi akụrụ, ọnụọgụ ọrịa kansa, mmerụ nke mmega ahụ yana adịghị ike lipid nwere ike jikọta ya na mmachi ogologo oge nkekabohaidretn'imenri.
Kedu ihe rụrụ arụ Keto?
Nwere nri esiri esi
Unyi ketoa na-akpọkwa ya umengwụndia, dị ka ọ na-enye ohere maka nri dị ukwuu na nri juru. Ọ na-ewu ewu n'etiti ndị chọrọ inwetaketosisna-enweghị nọrọ ọtụtụ oge prepping ọchandianri.Mkpebi 17 2019
Gịnị 3 oriri cardiologists sị zere?
'Zereọ bụlanrinke nwere okwu 'trans,' 'hydrogenated,' or 'par hydrogenated' na aha a na-achota na ahianri, donuts, kuki na ihe nduku, ”ka Dr. DeVane na-adụ ọdụ. “Nakwa, mara banyere calorie ole na-esite na shuga.
Àkwá dị njọ maka AFib?
Ọdịdị nke Electrolyte na-emetụta ọrụ eletriki nkịtị na obi ma nwee ike ibute arrhythmias dị kaAfib. Iji zere nsị nri, sie nri dịka anụ, anụ ọkụkọ, naakwazuru oke, ma zere iri nri ndị dịpụrụ adịpụ ogologo oge, ọkachasị ndị nwere mmiri ara ehi.Ọnwa Ise 28, 2013
Kedu ihe na-eme ka fibrillation dịkwuo njọ?
Ọnọdụ ụfọdụ nwere ike ịkpalite ihe omume nkeatrial fibrillation, gụnyere: ị drinkingụbiga mmanya ókè, karịsịa ị drinkingụbiga mmanya ókè. ibubiga ibu ókè (gụọ banyere otu ị ga-esi felata) ị na-a drinkingụ ọtụtụ caffeine, dị ka tii, kọfị ma ọ bụ ihe ọ energyụ energyụ ike.
Nri nri obere obere carb nwere ike ibute fibrillation nke atrial?
Enwere ọtụtụ usoro nke nri nri obere carbohydrate nwere ike ibute mmalite nke AFib. A na-atụ aro na ndị na-eso obere nri carb nwekwara ike iri obere ọka, mkpụrụ osisi, na inine nke nyochachara nke ọma ihe na-egbochi mkpali.
Kedu ụdị nri kachasị mma maka AFIB?
Mbelata nnu nnu nwere ike bụrụ ụzọ bara uru iji nyere aka belata AFib. Ọ bụrụ na mmadụ esoro nri Mediterenian, ọ ga-adịkwa mkpa ịbelata ọtụtụ nri ndị edepụtara n’elu. Enwere ụfọdụ ihe akaebe na obere nri carb, dị ka nri nri, nwere ike ịbawanye ohere nke AFib.
Nri nri keto nwere ike ibute nsogbu nke AFIB?
Enwere ụfọdụ ihe akaebe na obere nri carb, dị ka nri nri, nwere ike ịbawanye ohere nke AFib. Agbanyeghị, ndị nyocha kwesịrị ịmekwu ọmụmụ iji kwadoo ma ghọta nchoputa ndị a.